Kana uri remara munhu anoshandisa a wiricheya yemawoko, kana yave nguva yekuitsiva hakuwanzo kuve nematambudziko. Kana chimwe chinhu chikatadza kufamba nacho, inishuwarenzi yekurapa inovhara chero kugadzirisa kana kutsiva.
Matambudziko anoitika kana iwe usina chekuvhiya chekurapa kana kana iwe ukasimukira kumusoro kune simba wiricheya kana sikuta. Manual mawiricheya mutengo unosvika kumadhora mazana matatu kana kudarika zvichienderana nezvinodiwa pa wiricheya. Kana iwe usina chekushandisa chekurapa kufukidza mutengo uchafanirwa kutakurwa newe.
Mitemo neMirau yeMakambani Ekurapa
Kana iwe une chigaro chemagetsi kana sikuta, makambani ekurapa anozvitora kureva kuti hauchadi a wiricheya yemawoko uye hazvizogadzirise kana kutsiva zvako wiricheya yemawoko. Mari yacho zvakare ichave iri muhomwe yako kana iwe uchafanira kungoita pasina a wiricheya yemawoko.
Kune nzira dzekugadzirisa kana kutsiva yako wiricheya yemawoko izvo zvisingadhuri. Tarisa uone misika yeflea kana kurega shamwari kana mhuri vazive kuti uri kutsvaga chekare mavhiripu kwezvikamu. Paunenge iwe wawana imwe kana iwe, unogona kutanga kubvisa zvikamu nekuzvitsiva pane yako wiricheya yemawoko. Matai nezvigaro zvinoita kunge zvinopera nekukurumidza uye zvinoda kutsiva kazhinji.
Kubata weKunharaunda Mutengesi
Unogona kuwana yakashandiswa wiricheya izvo zvinogona kuve zviri nani pane izvo zvaunazvo. Mune ino kesi ingoshandisa iyo wiricheya iwe wawana uye wakagadzira chechipiri cheya yakanaka kubva kune mamwe ma spare parts. Iye zvino wave nesipoti wiricheya yemawoko.
Kana iwe usina rombo rakanaka rekuwana chero macheya akamboshandiswa, bata kambani iri padyo neyezvokurapa uye uwane mutengo wechikamu chaunoda. Ukangowana chikamu unokwanisa kugadzirisa iwe pachako kana uchikwanisa kana kuva neshamwari kana nhengo yemhuri ikubatsire. Izvi zvakadhura zvakanyanya pane kuita kuti kambani yezvigadzirwa zvekurapa igadzirise.
Shamwari kana nhengo yemhuri ichafara kukubatsira iwe munzira ipi neipi. Kana iwe uine cheya yemagetsi kana sikuta, iwe unofanirwa kushandisa yako wiricheya yemawoko zvakanyanya sezvinobvira, kunze kwekunge chiremba wako akuraira neimwe nzira.
The wiricheya yemawoko inochengeta yako yepamusoro muviri nhare kunyanya maoko ako uye haufanire kunyatso tsamira pasimba cheya kana sikuta.